रोचक Archives - ताजा समाचार
एजेन्सी, २६ असोज काठमाडौं । मानिस आफूलाई मनपर्ने जोडीसँग बिहे गर्नका लागि अनेकौं सीमाहरु पार गर्ने गर्दछन् । तर अमेरिकाको टेक्सासमा बस्दै आएका एक व्यक्तिले आफ्नो मग्नीसँग बिहे गर्नका लागि बैंक नै लुटेका छन् । ह्युस्टनभन्दा करीब १२० किलोमिटरको दुरीमा रहेको ग्रोवेटनमा ३६ वर्षीय हिथ बन्पसले आफ्नो बिहेको खर्च उठाउनकाृे लागि भन्दै बैैंकमा चोरी गरेका छन् । खासगरि हिथसँग औंठी किन्ने र रिसेप्शन खर्च उठाउने रकम थिएन । प्रहरीका अनुसार बिहेको खर्च जुटाउनका लागि उनले चोरी गरेका हुन् । जब पछि यो घटना आफ्नी हुनेवाली मग्नीले थाहा पाइन् तब उनले हिथलाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गर्दै उनलाई मनाएकी थिइन् । प्रहरी अफिसरका अनुसार आफ्नो मग्नीले मनाएपछि हिथले आत्मसमर्पण गर्न तयार भए । यसका साथै हिथले प्रहरीलाई बिहेको औंठी किन्नका लागि र विवाहको समारोहको खर्चका लागि पैसा नभएको कारणले बैंक लुटेको स्वीक
Oct72019 by ताजा समाचारNo Comments
यसरी बनाउनुस दशैमा स्वादिष्ट मासु, एक एक तरिका सहित
हामी दशैंको माहोलमा छौं । तपाईको घरमा घटस्थपनाको दिन राखेको जमरा टुसा आइसकेको होला । अब अष्टमीको दिन आउँन केही दिनमात्रै बाँकी छ । अष्टमीको दिन नेपालीहरुको घरघरमा खसि, बोका काटिन्छ । घरमा नै खसिबोका नकाट्नेहरुको घरमा पनि दशैमा मासु हुन्छ । मासुलाई दशैंको विशेष परिकारको रुपमा लिइन्छ । दशैको मासुलाई विशेष परिकार बनाउन पकाउन र स्वादिष्ट बनाउन पनि जान्नु पर्छ आज हामी तपाईलाई मासुलाई स्वादिष्ट बनाउने तरिका सिकाउँदैछौ । –सम्भव भएसम्म घरमै पेलेको तोरीको तेल प्रयोग गनुर्स –कराईमा तेल राखेर तताउने, –तेल तालेपछि ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी, तेजपत्तालाई फुराउनुस् । –त्यसपछि प्याज हालेर रातो हुनेगरी भुट्नुस्, – प्याज रातो भएपछि खसिको मासु राख्नुस्, –खसिको मासुलाई दुई मिनेटसम्म चलाउँदै भुट्नुस्, –दुईमिनेटपछि बेसार, नुन राखेर चलाउनुस्, –नुन र बेसार राखेको मासुलाई २० मिनेटसम्म सानो
Oct42019 by ताजा समाचारNo Comments
युवतीहरुले खोज्न थाले लजालु पुरुषको शुक्रकिट
सूचना प्रविधिको आजको युगमा हरेक चिज अनलाइन बजारमै उपलब्ध छन् । क्लिक गरेको भरमा चाहेको कुरा पाउन सकिने जमाना आइसक्यो । मोबाइल, ट्याब, फर्निचर, खानेकुरा, लत्ताकपडा त सामान्य भैसक्यो । इन्टरनेटको बजारमा शुक्रकिट समेत उपलब्ध हुन थालेको छ । इन्टरनेटमै शुक्रकिटको उपलब्धताले होला शुक्रकिट प्रति महिलाको छनौटको अधिकार पनि विस्तार भएको छ र रुची पनि बदलिएको छ । एक अध्ययन अनुसार महिलाहरुले ज्ञानी, स्मार्ट तथा लजालु पुरुषको शुक्रकिटलाई पहिलो रोजाइमा पार्दछन् । क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी तथा एक अनलाइन शुक्रकिट ब्यांकद्वारा गरिएको अध्ययनबाट यस्तो खुलासा भएको हो । अध्ययन अनुसार महिलाहरुको पहिलो रोजाइमा यस्ता पुरुषको शुक्रकिट पर्दछ जो बुद्धिमान हुन्छ, लजालु हुन्छ, ठण्डा दिमागले चिन्तन मनन गर्न सक्छ र छिटो रिसाउँदैन । शोधकता प्रोफेसर स्टिफेन व्हाइटका अनुसार स्पर्म ब्यांकमा शुक्रकिट दान
Sep282019 by ताजा समाचारNo Comments
पाेखरा १० असाेज- आफूलाई आमाले पैसाका लागि १५ वर्षको उमेरमै परपु’रुषको हातमा यौ*नसम्बन्धका लागि बिक्री गरिदिएको यी अभिनेत्रीले खुलासा गरेकी छन् । हलिउडकी अघिल्लो पुस्ताकी चर्चित अभिनेत्री डेमी मुरले एक कार्यक्रममा जीवनको पी’डादायी कथा सुनाएकी हुन् । ‘मेरो आमा म’दिराको लतमा थिइन् र उनीसँग म’दिरा पिउन र खाना खानका लागि पैसा भएन । सोही कारण उनले ५ सय अमेरिकी डलरमा एक जना पु’रुषसँग यौ’नसम्ब’न्ध राख्न मलाई ज’बर्ज स्ती बेचिदिइन् ।’ १ कार्यक्रममा आफ्नो किशोरा अवस्थासम्मको कथा सुनाइन् तब त्यो समयको पीडा सम्झेर यी अभिनेत्रीको आँखा रसाएका थिए । ‘मेरो आमा म’दिराको लतमा थिइन् र उनीसँग म’दिरा पिउन र खाना खानका लागि पैसा भएन । सोही कारण उनले ५ सय अमेरिकी डलरमा एक जना पु’रुषसँग यौ’नसम्ब’न्ध राख्न मलाई ज’बर्ज स्ती बेचिदिइन् ।’ त्यो बेला आपूले निकै ठूलो पीडा सहेको यी अभिनेत्रीले बताइन् । यसो भनिरहँदा
अरु पो’र्न स्टारले संघर्ष गरिरहेका बेला मिया खलिफा कसरी भइन् रातारात स्टार ?
एजेन्सी। पूर्व पो'र्न स्टार मिया खलिफाले बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा पो'र्न फिल्म क्षेत्र छोडेको बताएकी छिन् । उनले अन्तरवार्ताको क्रममा उनी उक्त क्षेत्रमा कसरी र किन पुगिन् भन्ने विविध प्रश्नहरुको खुलेर जवाफ दिएकी छिन् । ए ड ल्ट क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गरिन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले, ‘मलाई लाग्थ्यो म त्यति सुन्दर छैन । म कलेज पढ्दा आफ्नो तौलका कारण निकै चिन्तित रहने गर्थे । मलाई कसैले वास्ता गर्दैनथे । त्यसपछि मैले ग्र्याजुएसन गर्दै गर्दा तौल पनि घटाए । मलाई मेरो स्त न ठूलो भएको कारण निकै अप्ठ्यारो महसुस हुनेगथ्र्यो । त्यसपछि विस्तारै तौल घटेसँगै मानिसहरुले मप्रति चासो दिन सुरु गरे ।’ उनले अगाडि भनिन्, ‘ग्र्याजुएसन पूरा भएपछि जागिरको खोजीमा थिए । त्यसपछि मैले एउटा केटा भेटे उसले मसँग काम गर्न चाहेको इच्छा व्यक्त गर्यो तर उसले यो ए ड ल्ट फिल्ड भएको पनि जानकारी दियो । उसले मलाई सुन्
Sep252019 by ताजा समाचारNo Comments
नेपालमा यस्तो पनि गाउँ छ । जहाँ युवतीहरुले केटा नपाउँदा वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाएका छैनन् । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यो खबर गोरखाका विकट गाउँहरुको हो ।बिही ६, न्याककी कान्छी गुरुङ २९ वर्ष पुगिन् । न घरमा बिहे गर्ने कुरा गर्छन् न कसैले उनलाई बिहे गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्छ । अहिलेसम्म उनको लगन जुरेको छैन । ‘गाउँमा केटा छैनन्, म मात्र होइन हाम्रो गाउँमा थुप्रै केटीको बिहे भएको छैन, कतिको बिहे नभएरै कपाल फुलिसक्यो,’ गुरुङले भनिन् । उत्तरी गोरखाको बिही ६, न्याकमा रहेको करिब ४५ धुरीघरको एकै गाउँमा घरेपिच्छेजस्तो बिहे गर्ने उमेरका तर नभएका युवती छन् । बिहे गर्ने उमेरका युवती धेरै हुने, युवक पढाइ, रोजगारीको सिलसिलामा गाउँ छाडेर जाने भएपछि गाउँका युवतीको बिहे नभएको स्थानीय बताउँछन् । ‘मैले एक कक्षा पनि पढिनँ, घरमा घाँसदाउरा गरेर बसेँ, केही नजान्ने मलाई कसले पो बिहे गर्थ्यो रु’ स्थानीय देवानी ग
Sep242019 by ताजा समाचारNo Comments
खुसी आफ्नो चाहनासँग सम्बन्धित हुन्छ । चाहना र खुसी जोडिएको छ । हामी कस्तो हुन चाहन्छौँ भन्ने कुराले हाम्रो खुसी निर्देशित हुन्छ । त्यसकारण खुसी भनेको एक प्रकारको दृष्टिकोण हो । जसले आफूलाई सन्तुष्ट लाग्ने कुराहरु खोज्न अभिप्ररित गर्दछ । खुसी र दृष्टिकोण एकआपसमा जोडिएको छ । दृष्टिकोणले खुसी दिने हो । खुसी एउटा यस्तो दृष्टिकोण हो जसले हामीलाई सन्तुष्ट दिन्छ । खुसी हुनको लागि कस्तो दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ ? पहिले आफू के चिजले खुसी होइन्छ, त्यो थाहा पाउनुप-यो। धेरै मानिसलाई खुसीको कारण के हो र के कुराले खुसी दिन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन । आफू के कारणले खुसी हुन्छु भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । त्यहाँबाट खुसी सुरु हुन्छ । मानिस आफूभित्रको खुसी थाहा नपाई बाहिर बाहिर खोज्दै हिँड्छ । अरुले जे भन्यो, त्यही कुरामा खुसी खोज्न थाल्छन् मानिसहरु । अरुले दिएको कुराले खुसी दिन सक्दैन । खुसी आफैंले सिर्जन
Sep232019 by ताजा समाचारNo Comments
“पैसा” अनि “बैस” जिन्दगीभर रहदैन, त्यसैले बाचुन्जेल अहम होइन नम्र भएर बाच अनि हास
१. यति धेरै पनि नरिसाउनुस् आफ्ना संग कि पछि गएर बोल्नको लागि वाक्य होइन बहाना खोज्न परोस २. “पैसा” अनि “बैस” जिन्दगीभर रहदैन, त्यसैले बाचुन्जेल अहम होइन नम्र भएर बाच अनि हास । ३. घोच्ने काडा हरु भन्दा खतरनाक हुन्छन बोलीने बचन हरु, काडाले घोचेको त उपचार पछि निको हुन्छ तर बचनले घोचेको त बल्झीरहन्छ । ४. बिर्सियो भनेर नसम्झनु, तिमिले पराईलाई झैं गरेको ब्यवहार सहन नसकेर मौन बसेको मात्र हुँ ! ५. भाग्यमा खोजेर पाउने भनेको त दुख मात्र हो , सुख त आफुले मेहनत गरेर पाउने हो । ६. देखिने घाउ हरु भन्दा नदेखिने घाउको पीडा अति धेरै हुन्छ । ७. कहिलेकाही मन मा पिडा हुँदा नि हास्नु पर्ने रहिछ के थाहा तिमी लाइ पिडा हुँदा अरुले मजाक पो गरिरहेका छन कि । ८. बोलीमा मिठास मात्र भएर के गर्नु , जब मनमै कालोपन भएपछि । ९. एउटा राम्रो मन हजारौं राम्रो अनुहार भन्दा ठूलो हुन्छ त्यसैले जीन्दगीमा हम
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार प्रत्येक धातुले हामीमाथि प्रभाव पार्ने गर्दछ किनभने यो सबै सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहको खेल हो । हरेक धातुको एक विशेष ग्रहसँग सम्बन्ध हुन्छ । यी ग्रहले ती धातुलाई आफू अनुसार प्रभावित गर्ने गर्दछ । तामा, चाँदी, सुन वा महँगा रत्न वा हिराले बनेको आभुषण, यी सबै कुराले कि त हामीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ वा यसले हामीमाथि नकारात्मक असर पनि पुर्याउने गर्दछ । तर यदि तपाईं सुन लगाएर आफ्नो जीवन सुखमय बनाउन चाहनुहुन्छ भने पंडित प्रफुल्ल भट्ट अनुसार थाहा पाउनुस् सुनका शुभ–अशुभ असर र यसको प्रयोग गर्ने तरिका बारे । खुट्टामा सुन नलगाउनुहोस्ः खुट्टामा सुनको बिच्छी वा पाउजु लगाउनु हुँदैन । सुनलाई खुट्टामा लगाउँदा दाम्पत्य जीवनमा समस्या आउन सक्छ र स्वास्थ्य पनि खराब हुनसक्छ । घरको यो दिशामा राख्नुहोस् सुनः केही मानिसहरु सुन घरमा राख्छन् । त्यसकारण यदि तपाईं सुनल
Sep222019 by ताजा समाचारNo Comments
जब बेहुली जन्ती लिएर बेहुलाको घरमा पुगिन्…
बङ्गलादेश–बङ्गलादेशमा मुसलमान समुदायको वैवाहिक परम्परालाई चुनौति दिँदै एक किशोरीले आफूले मन पराएको केटासँग विवाह गर्नका लागि ‘जन्ती’ लिएर बेहुलाको घरमा गएपछि उनीहरू यहाँको सामाजिक सन्जालमा भाइरल भएका छन् । यसले परम्पराको नाममा हुने महिला अधिकार हननका बिषयमा बहस तीब्र बनाइदिएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार खाजिदा अख्तर खुशीले सयौँ जन्ती लिएर बेहुला तारिकुल इस्लामको घरमा पुगेकी थिइन् । शनिबार सम्पन्न विवाह बङ्गलामदेशको पश्चिमी ग्रामिण जिल्ला मेहरपुरमा भएको हो । मुसलमान परम्परा अन्य परम्पराका तुलनामा बढी कट्टर मानिने भएपनि एशियाली यस मुलुकमा भएको विवाह उत्सवले सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभर चर्चा पाएको छ । खुशीले जन्ती लिएर बेहुलाकहाँ गएको घटनाले विश्वभर स्थापित मान्यतालाई उल्टाएको छ । “हो, परम्परागतरूपमा यो असामान्य हो । तर, अन्य दिदीबहीनीहरूले पनि यसलाई ब्य